भयानक बन्दैछ, भिटामिन डीको कमी - khabarpatro
१३, कार्तिक २०७७
भिटामीन ‘डी’ चिल्लोमा घुल्ने स्टेरोइडल (कोलेस्टेरोलबाट बनेको) भिटामिन हो । यो भिटामिन प्राकृतिक रुपमा धेरै कम खानेकुराहरुमा मात्र पाईन्छ । क्यालसियम र फस्फोरस जस्ता महत्वपूर्ण खनिज तत्वहरुको उपपाचनका लागि आवश्यक यो भिटामिनको अभाव अहिले आम रुपमै देखिन थालेको छ । आन्तरिक रुपमा शरीर भित्रै पनि बन्न सक्ने हुनाले धेरै वैज्ञानिकहरू यसलाई भिटामिन नमानेर हर्मोन पनि मान्दछन् ।
३) मृगौलामा मुत्रको रुपमा खेर गईरहेको क्याल्सियमलाई पुनःअवशोषण गरी क्याल्सियम नष्ट हुन दिदैन ।
१०) डर चिन्ता, तनाव र उदासिनताको समस्याकमगर्न सहयोग गर्दछ ।
५) कपाल झर्ने, नङ भाचिने ।
९) बेचैनी बढ्ने (भावनात्मक विचलन भइरहने ।
१६) मांशपेशीहरु बाउडिने
१७) जोर्नी दुख्ने
१८) निन्द्रा कचमिच रहने
३) सूर्यको किरण प्रतिराधि निवास स्थान, भेषभुषा र मौसम ।
केही खानेकुरामा भिटामिन डी पाइन्छ
१) बोसो भएको माछा/माछाको तेल
भिटामिन डीको कमीको प्राकृतिक उपचार
भिटामिन डी कम भएकाहरुले यो कमिलाई पुर्ति गर्न सर्वप्रथम शरीर भित्रै भिटामिन डी बन्ने क्रियालाई बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सूर्यको किरणमा बस्नुपर्ने हुन्छ । हप्तामा १ वा २ दिन वा महिनामा ५–७ दिन वा वर्षमा ५०–६० दिन हरेक पल्ट ४५ मि. देखि १ घण्टा सम्म घाममा बसियो भने पनि शरीरलाई चाहिने जति भिटामिन डी शरीर भित्रै बन्न सक्छ । घाममा बस्दा सकभर निवस्त्र भएरै बसेको राम्रो हो ।
निवस्त्र हुन सम्भव नभए कमसे कम ८०–८५५ हिस्सा कपडा विहिन हुन आवश्यक छ । घाम जतिच र्को भयो त्यति नै भिटामिन डी को संश्लेषण ज्यादा हुन्छ तर चर्को घाममा सूर्यको अल्ट्राभाइलेट विकिरणले अन्य अंग र छालालाई आघात पु¥याउने हुँदा सकभर बिहानको घाम ताप्न उचित हुन्छ ।
क. भोजानद्वारा उपचार :
भिटामिन डी खानाको माध्यमद्वारा पनि प्राप्तगर्न सकिन्छ । भिटामिन डी को मूख्य प्राकृतिक श्रोत माछा, माछाको तेल, कलेजो, मृगौला, अण्डा जस्ता फल मासु हुन तर मासु स्वस्थकर खाना नभएकाले भिटामिन डी को लागि मासु नखाएर सप्लिमेण्ट लिनु उपयूक्त हुन्छ । आजकल भिटामिन डी मिसाइएको दही, दुध, तोफु, चिज, पनिर र अन्य खानेकुराहरु पनि पाइन्छ । यो चिल्लो पदार्थमा घुल्ने भिटामिन हो । तसर्थ भिटामिन डी लाई सही सदुपयोग गर्न स्वस्थकर चिल्लो पदार्थ खानुपर्ने हुन्छ । विशेषतः तैतिय फलफूल, सुख्खा फलफूल र क्रिमयूक्त दुध तथा दुग्ध परिकार आदि खान स्वस्थकर हुन्छ भिटामिन डी युक्त खानेकुराहरुको साथमा क्यालसियमयुक्त खानेकुराहरुको सेवन गर्न पनि अपरिहार्य हुन्छ । दुध र दुग्धजन्य परिकारहरु हरियो सागपात, पालुगो, लट्टे, लुडे, वेथे, च्याउ, सिबी, बोडी, काउली, ब्रोकाउली, चुकन्दर, टमाटर, केरा सुन्तला, सिंघाडा आदिमा प्रसस्त क्याल्सियम पाईन्छ । कोदो, फापर, गहत, मकै, जवार, बाजरा, जूनेलो, सामा, कागुनीचिनो आदिमा पनि प्रशस्त क्यालसियम पाईन्छ ।
ख. व्यायमद्वारा उपचार :
श्रम वाव्यायम गर्ने बानीले शरीरलाई स्फूर्त एवं तन्दुरूस्त बनाइरहन मद्दत गर्दछ । व्यायाम गर्दा नशा नाडीमा रक्त संचार भइरहने हुदा भिटामिन डी लाई कोष कोषसम्म पु¥याएर यसको कार्यलाई पूर्ण गर्न मद्दत पु¥याउदछ । दैनिक ३० मिनेटको व्यायम हर कसैलाई आवश्यक पर्दछ । व्यायम गर्दा एकपल्ट शरीरका सबै जोर्नीहरु चल्नुपर्नेछ र एकपल्ट सररर पसिना फुट्नु पर्ने र शरीरका भित्रीअंगको पनि व्यायम हुनुपर्ने हुन्छ ।
लेखक योगी नरहरिनाथ योग तथाप्राकृतिकचिकित्सालय भरतपुर–१ वागीश्वरी चितवनका मेडिकल डाईरेक्टर हुन् । (अनलाइनखबर)
प्रकाशित मिति :कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार - १२:३६:२९ बजे